Nhau - Izvo zvese zvirimwa, zvese kudzika
Mazhinji zvirimwa zvitsva svondo rino, mazhinji acho anogona kunge ari matsva kwauri, saka tsananguro diki ingangove iri zano rakanaka:
Maapuro emukadzi mutsvuku ane nyama inonaka kwazvo, inonaka inondifungisa maapuro akanyanya kuibva awakambodya nechinhu chidiki chemapure syrup.
Maapuro eFuji, anonziwo maapuro matsvuku, akatenderera, maapuro akaumbwa akafanana egirobhu tsvuku. Ivo vakangotapira kupfuura mutsvuku mukadzi apuro, aine mashoma akaonda madziro. Tinoda izvi zvejamu uye bhekari.
Takakurira maapuro eGala pakukumbira kusingaperi kwevanopinda kunze kwenyika mhiri kwemakungwa. Aya ndiwo madiki maapuro anotaridzika chaizvo seanopenya akatenderera mwenje mabumba, asina chekuwedzera kuwedzera, asi yakawanda yekuravira. Ivo vagara vanoshandiswa kugadzira Caribbean saradhi madhishi, musanganiswa wakasanganiswa weapuro musidhari, mhiripiri, hanyanisi, uye gariki, iyo inoshandiswa kunatsa zvese kubva mupunga uye bhinzi, nyama, kana veggies.
Mushure mekurongedza mukati medu ese anyanisi akachengetwa, isu zvakare tine mashoma mashoma emakesi madiki akaenzana anotapira hanyanisi, anenge saizi yemaparera anyanisi. Izvi zvaizove zvakakwana zvakasungirirwa pane skewers yemakabhi akachekwa, akadonhedzwa akazara mumateji, kana kungodzingirirwa pasi sezvazvakaita kune vese vatinonamata navo fan.
Ndiko kumhanya-mhanya kwezvirimwa 'zvisina kujairika' izvozvi. Tichine zvakawanda zvakajairwa gariki, ginger, maapuro matsva, uye hanyanisi kana zviri izvo zvaunofarira, inzwa wakasununguka kuuya kuzotarisa mapikicha edu epurazi pawebhusaiti yedu, uye uteedzere chinongedzo pazasi www.primeagr.com. [mapikicha epurazi anoiswa pano]
Imwe tsamba yekupedzisira, tinofanirwa kunhonga nekurongedza pakutanga mumazuva sezvinobvira kuti uve nechokwadi chekuti mavegi ako anopinda kunze kwevhu nyowani munda kuchengetedza hunhu hwakanaka. Kune avo venyu vanosarudza kuisa pre-maodha, munogona kutibatsira kunze nekuwana maodha enyu munguva pfupi yapfuura kupfuura yakajairwa, saka isu tinoziva izvo zvatinofanira kuva nazvo paruoko rwako. Isu tinoda shiri dzekutanga!
Kutenda senguva dzose kune rako bhizinesi, uye uve nevhiki rakanaka!